सरकार भन्छ-देउवाले भनिसके, तोड्छन् अनसन नतोड्ने डा. केसीको अडान, - Websoft IT Nepal Pvt. Ltd. - Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
Home » समाचार » सरकार भन्छ-देउवाले भनिसके, तोड्छन् अनसन नतोड्ने डा. केसीको अडान,
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुअघि राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीको जीवनरक्षाप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । विधेयक पास भएपछि अब डा. केसीसँग वार्ता हुन सक्ने उनको संकेत थियो ।
तर, केही घण्टामै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने वार्ताको सम्भावनालाई खण्डन गरे । अनसनको विषय सकिएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले डा. केसीलाई अनसन तोड्न मात्रै आग्रह गरेनन्, सिटामोल बोकेर जनतामाझ जानसमेत सुझाए ।
एक मन्त्रीका अनुसार डा. केसीसँग सम्वाद गर्ने/नगर्नेबारे सरकारको अन्योल कायमै छ । ‘भोलि (शुक्रबार) मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ, त्यसअघि पनि नेताहरुको कुराकानी होला’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, डा. केसीको माग पूरा गर्न यसपटक सजिलो छैन ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि माग बनाएकोमा नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादीहरु डा. केसीसँग रुष्ट छन् । पूर्वएमालेहरुलाई मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्न नदिएको झोक छँदै छ । त्यसैले योपटक दुबै पक्षका वाम नेताहरु एक भएर डा. केसीविरुद्ध उभिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले डा. केसीलाई अनसनबाट उठ्नोस् भनिसकेपछि अब डा. कृसीले एकतर्फीरुपमै अनसन तोड्ने सम्भावना देखिएको विश्लेषण सत्तापक्षले गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री निकट एकमन्त्रीले भने, ‘शेरबहादुरजीले नै अनसन तोड्नोस् भनेपछि उहाँले अनसन तोड्ने सम्भावना बढेको छ ।’
दबाव बढाउँदै चिकित्सक संघ
योपटक सरकारसँगै सिंगो नेकपा एक ढिक्का भएर डा. केसीसँग सम्झौता नगर्ने लाइनमा उभिएको छ । यसले चिकित्सकहरु पनि विभाजित देखिएका छन् । नेकपा निकट चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु डा. केसीको अनसनविरुद्ध प्रदर्शनमै उत्रिएका छन् ।
यसले अरु अनसनहरुमा जस्तै योपटक सरकार दबावमा परेन । तर, नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । तत्काल वार्ता गरेर डा. केसीको जीवनरक्षा नगरे थप कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसको जिम्मेवार सरकार स्वयंम हुनुपर्ने उसको चेतावनी छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि क्रमशः डा. केसीको पक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पनि सरकारमाथि दबाव बढाइरहेको छ ।
त्यसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भए पनि अनसनरत डा. केसीसँग सम्झौता गर्न सरकारमाथि दबाव बढ्दो छ । तर, सरकारले अब के गर्छ भन्ने अन्योल भने कायमै छ । Source: online khabar